Duqa Hargeysa Oo Fagaare Lagu Arkay Roobkii Khasaaraha Dhaliyay Ka Dib + Ceebta Dawladda Hoose Oo Uu Bulshadii Soo Dooratay Dib Ugu Celiyay
(Hadhwanaagnews) Sunday, April 15, 2018 16:08:44
Magaaladda Hargeysa oo si la mid ah deegaamadda Kale ee Somaliland ay uga curteen Roobabka Gu’gu ayaa waxa u dheer Ceebo badan oo ay dawladda Hoose ee Hargeysi leedahay oo markii uu roobku da’ayba dibada u soo baxay.
Wadooyinka Halbawlaha u ah u socodka Hargeysa oo ay dawladda Hoose iyo shacabku dhisamahooda iska kaashadeen ayay roobabku khasaare soo gaadhsiiyeen.
Sidoo kale meelo loogu talo galay in ay biyuhu maraan oo dusha sare ka qaawanaa ayaa iyagana dad gaar ahi ay samaysteen, waxaanay sababtay in ay khasaare soo gaadhsiiyaan waddooyinka.
Qashin badan oo la socday
daadadka ayaa iyaguna xidhay wadooyinka waaweyn.
Hadaba duqa Magaaladda Hargeysa ayaa sheegay in aanay jirin duruufo dheeraad ah oo ka muuqda Magaaladda Hargeysa, hasayeeshee dad isaga duulimaad ku ahi ay baahiyeen warar lidi ku ahi
“Dadkeenu caadiyan waxa ay u barteen in caadiyan ay raaciyaan qashinka xilliga roobka, Mid kale ayaaba iminka inagu cusub oo ah ‘Hooyo Qashinka ku daadi Daadka aan ku sawiro Maayorkaan ku ceebaynayaaye, Muwaadinimadeenii Halkaas ayay Maraysaa.
Inamada Facebookga soo dhigaya ee leh Hooyo qashinka ku daadi aan ku sawiree Mayorkaan ku ceebaynayaaye, waxa aan leeyaha aniga iguma ceeboobayso, laakiin qof kasta oo muwaadin ah ceeb ayay ku tahay” ayuu yidhi Duqa Hargeysa.
Waxa aan leeyahay Muwaadiniinta Qashinku kama soo baxo aqal gooni ah, laakiin aqal walba wuu ka soo baxaa waxa aad samaysaan markaa la suga qolada qashinka, Laakiin daadka ha raacinina” Ayuu yidhi isaga Eryal u waramayay.